Xidhidhka FIFA Oo Soo Saaray Musharaxiinta Abaal-maarinta Xidiga K/Cagta Addunka 2016/17
HomeChampions LeagueXidhidhka FIFA Oo Soo Saaray Musharaxiinta Abaal-maarinta Xidiga K/Cagta Addunka 2016/17
22/09/2017 Cabdirisaaq Maxamuud Caalin
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Neymar ayaa uu sharaxaan abaal-maarinta xidiga sanadka ee xidhidhka kubada cagta addunka ay sanad kaste bixiso, waxaana sida ay ku shegeen warsaxafadeed ay soo sareen Jimcihi shalay.
Ronaldo ayaa door wayne ka ciyaaray guulihi kooxdisa Real Madrid inay sanadkii labaad oo xidhidhsan ku guulaystan koobka horyaalka Champions League isago noqday laacibkii ugu goolasha badna (12 gool) uu dhaliyee, waxaa kalo iyaguna liistada kula jiraa Lionel Messi iyo Neymar oo hoorseeday in naadiga Barcelona ku guulaystan koobka Spanish King’s Cup islamarkaana Neymar ka hor intanu ka tegin naadiga uu horyaalka La Liga gool dhalinta 37 gool xili-ciyaareedki hore uu dhaliyee. Kabtanka kooxda Juventus, goolhayee Gianluigi Buffon ayaa isna ku jiraa liistada magaacyada kama dambaysta ah ee goolhayaha ugu wanagsan kadib markii uu ku hogaamiyee naadiga Taliyaniga qadaan koobki lixaad oo xidhidhsan horyaalka dalka Taliyaniga ee Serie A, iyo sidoo kale koobki 3ad oo xidhidh ah Italian Cup isla markaana kaalinta labaad ku dhamaystay kulankii kama dambaysta ah ee Champions League.
Waxaa iyaguna la tartamayaa abaal maarinta goolhayaha Real Madrid Keylor Navas iyo goolhayaha Bayern Munich Manuel Neuer, halka tobabarayasha ay uu sharaxan yihiin abaal maarinta tobabarihii ugu wanaagsana Zinedine Zidane, Antonio Conte Chelsea iyo tobabaraha naadiga Juventus Massimiliano Allegri ayaa iyaguna uu sharraxaan abaal-maarinta tobabaraha uu wanagsan sanadka (2016/17).
Dhanka haweenka, haweenayda uu wanagsanayd sanadka 2016/17 oo ay uu tartaami doonan wareeryahanka xulka Venesuela Deyna Castellanos, xidigada khadka dhexe xulka Maraykanka Carli Lloyd iyo Leike Martens oo xulka Holland ka cawisay guushi koobka Euro 2017.
Xaflada lagu bixin doono abaal-maarinta xidhidhka FIFA ee kubada cagta addunka kana dhicii doonta magaladda London ee dalka Ingiriiska 23 bisha Oktoober sanadkan. Waxaana halkan ka akhrisata liistada magaacyada iyo abaal-maarinta ay u sharaxan yihiin; The Best FIFA Men’s Player:
Willy Caballero: Chelsea Oo Heshiis La Gashay Gool-hayihii Hore ee Manchester City
20 sanadood ka hor, Midowgii Ronaldo Iyo Barcelona – Qisooyinka Mucjisadii Weerarka Dunida…
All Goals & Highlights: Chelsea 3-0 West Brom